Itoophiyaa,Masrii fi Suudan Gurrandhalaa 12-23 huji Hidhaa Abbaayaa irratti Washington,DC keessatti kora taa'an
Guraandhalaa 06, 2020
Hidhaa Laga Abbayaa
Bulchootii tun kora torbaan dhufu Washington taa’aniin waan duraan buufatan dubbatan irraa deebi’anii oduu wal irraa fuudhan.
Biyyootii tun sadeen haga ammaatti haroo hidhaa abbayaa tana akkamiin akka bisaaniin guutanii fi yoom yoom akka guutan wal dubbatan.
Akkas jechuun ammo yoo fkn lafatii bona taate,bonii dheerate hidhaa abbaytaa tana akkamiin akka bisaaniin guutan walii galan.
Akka itti aanaa ministera haajaa alaa fi ogeessaa hujii fi faayidaa laga Nile Masrii ka durii Ambassador Mohamed Higazy jedhetti tana irratti falamaaan wal makaraarsuu mannaa faayidaa isii laalanii wal amanuu wayya.
“Yoo irratti walii galan misooma naannoo ka namuu abdatu humna elektirikii ka namaa jabeessa.Biyyitii sadeenuu waliin badhaati.”
Ambaassaddor Mohammed Higaazii dubbii tana nagaan fixachuuf warra jaarrumaan rakkoo fale abdata.
“USA,baankii addunyaa fi dhaaba maallaqa addunyaa faatii marii ganna kana fixachuuf abdannu tana faluutti jira.Fedhiin siyaasaa biyya sadeenii Masrii,Itoophiyaa fi Suudaniilleen walii galtee tana keessaa marii tanatti dabalamuulleen akka wal amanan tolcha.”
Yoo walii galan Itoophiyaan karaa garbattiin baatu hin qamnelleen diida buufata doonii Masrii garba Mediteraaniyaan irraa fa’attee buufachuu dandeetti jedha.
“Akka kanaan Itoophiyaalleen mirga hidhaa laga Naayile jabeessitee misoomtuun qabaattii,Suudanilleen mirga laga kana tohattuun qabaattii Masriilleen mirga seenaan kenneef ka bisaan kanaan tohattu qab aatti jedha.”
Ambaasaadder Mohaammad akka biyyitii sadeenuu qalbii diriirteen wal caqasaa wal dhugeeffatanii fedha.Dhuma ji’a kanaatti biyyitii sadeenuu marii tana irratti akka dansaa walii galuuf abdiin eegatan.